2nd Chance | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » 2nd Chance
Posted by Wow on Dec 19, 2017 in My Dear Diary | 13 comments
2nd Chance By Wow
ရုပ်ရှင် Review တော့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်က Lucifer နဲ့ Super Natural Fan ဆိုတော့ ဒီကားလေးတွေက တော်တော် အားထုတ် အချက်အလက်တွေတော်တော် စုဆောင်းပြီးမှ ရိုက်တာဆိုတာ သိသာတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေ ကောင်းတာပြောစရာမရှိ ဒိုင်ယာလော့တွေက တချို့ဆိုတော်တော် မှတ်မှတ်သားသားရှိတယ်။
Castiel ပြောသွားတဲ့ အိန်ဂျယ်တွေက မလိမ်တတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ “Truth is situational.” ဆိုတာမျိုး…
သူ့ကလေးကို သတ်သွားတဲ့ အိမ်ဂျယ်တွေနောက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး နောက်ဆုံး အိမ်ဂျယ်တွေသုံးတဲ့ မန္တန်တွေသုံးပြီး အိမ်ဂျယ်တွေကို ပြန်သတ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆမ် နဲ့ Dean Winchester ညီအကိုတွေနဲ့တွေ့ပြီး “Patient is the talent.” သည်းခံခြင်းဆိုတာ အရည်အချင်းပါပဲ ဆိုပြီးပြောခဲ့တာမျိုး…
ခု 2nd Change ကတော့ Lucifer မှာ…
ဇတ်လမ်းသဘောအရဆိုရင် ဖန်ဆင်းရှင် God မှာ မိန်းမရှိပါတယ်။ Goddess ဖန်ဆင်းရှင်မပေါ့။ God ကို ဘုရားလို့တော့ ဘာသာမပြန်တော့တော့ဘူး၊ တစ်ခါ ဗုဒ္ဒဘုရားက God မဟုတ်ဘူး သူက human ဆိုပြီး ငြင်းတဲ့သူရှိဖူးလို့ပါ။ God ကို The Creator လို့ ပဲပြောကြလို့ပါ။
ဆိုတော့… ဖန်ဆင်းရှင်မှာ မိန်းမရှိတယ်.. အိန်ဂျယ်တွေက သားသမီးတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာမှာ ဆိုရင်တော့ ဒီကား ရုံတင်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘယ့်နှယ် ဖန်ဆင်းရှင်ဆွာ FA (Forever Alone) ဟာာာာ…. ဗြဟ္မစရိယာကျင့်တာလိုမိုးပေါပါတယ်
ခုတော့… အိမ်ထောင်တွေကျ ခလေးတွေနဲ့ ခွေးတွေနဲ့ဆိုတော့… စော်ဂါးလှချည်လားးးးး
ခင်ညား ခရစ်ယန် မဟုတ်ဘူးလားးးးးး
ကျနော် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာ… အမျိုးဘာသာမထိနဲ့ ဘယ်တော့မှ လက်မခံဘူး… ဘလာ ဘလာ ဆိုပြီး…. ဆန္ဒတွေပြ ဗီနိုင်းတွေထုတ် နေ့စားခတွေ ရလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းးးးးး…
ဟိ… ဟက်ချင်ရင် သဂျီးဆိုဒ် ဟက်ကြပါ ပိတ်သတ်… အနော်နဲ့မဆိုင်.. အယ်ဒီတာချုပ်မှာ တာဝန်ရှိပါတေ..
ဆက်ဆွဲရရင် ပိတ်သတ် ဖန်ဆင်းရှင်က သူ့မိန်းမ Goddess ကို ငရဲမှာလှောင်ထား သား Lucifer Morning Star ကို ငရဲကန်ချပြီး အုပ်ချုပ်ခိုင်းထားတယ် (စမောများ ဆွဲသလားမသိ.. စတာဖာ.. စတာဖာ)
Goddess က လူစီဖာ Los Angeles ရောက်နေတုံး ငရဲက လွတ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ချားလော့ လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ထက်ထက် အတ္တကြီးကြီး ခပ်ဟော့ဟော့ တစ်ယောက်အဖြစ် အသွင်ယူပါတယ်.. အဲလေ… ဝင်ပူးတယ်ပေါ့။
နောက်ပိုင်း Goddess က ပြန်ထွက်ခွာသွားတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့ အခွံ Vessel ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ချားလော့က အဲ့အချိန်က အဖြစ်အပျက်တွေ လုံးဝမမှတ်မိဘဲ… တနေရာမှာ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပျက်နေသလိုခံစားရတယ် ဆိုပြီး Lucifer ကိုပြောပြပါတယ်… အဲ့နေရာက ငရဲလို့ ဖြစ်မယ်လို့လဲထင်တယ်..တဲ့။ အဲ့နေရာကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မသွားနိုင်ဘူး ဆိုပြီး လူစီဖာကိုပြောတော့…
လူစီဖာက 2nd Chance အနေနဲ့ အခွင့်အရေးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်စိတ်ထဲ လိပ်ပြာမလုံတာ၊ မကောင်းဘူးလို ထင်တဲ့ဟာတွေ မလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်…
အဲ့နေရာမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ချားလော့ က ရှေ့နေပါ။ သူက တရားခံလို့ သံသယဖြစ်ခံရသူ တော်တော်များများကို လွတ်အောင် လိုက်ပေးခဲ့တယ်။ ပြောရရင် (သူမကွကိုယ်ပြောသလို) အလုပ်ကြိုးစား မကောင်းမှုဘာမှ မလုပ်သူပါ။ အဲတာကို ဘာလို့ငရဲသွားရသလဲလို့ လူစီဖာကို မေးတော့ လူစီဖာက မင်းစိတ်ထဲမှာ မင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်အတွက် လိပ်ပြာမသန့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်က ငရဲကိုပို့တာ လို့ပြောပါတယ်…
နောက် Season တစ်ခုမှာလဲ… လူစီဖာပြောထားတာ လူသားတွေက သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ငရဲကျနေတာ၊ မင်းသိလား ငရဲတံခါးတွေဆိုတာ ပိတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး (ဆိုလိုတာက ထွက်ချင် ထွက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့)
ဒါက စာရေးဆရာ အာဘော်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း ဆက်စပ်စဉ်းစားမိတာက လူတွေမှာ သေခါနီး လားရာအာရုံအလိုက် သွားကြရတယ်ဆိုတာပါ။ ဝိပသနာကောင်းထားရင် အာရုံမမှားတော့ဘူး ဆိုတာလေးပါ…
ဆိုတော့… ဒီ Guilty ဖြစ်နေတဲ့စိတ်က ငရဲပို့တာ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ သွား ဆက်စပ်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ 2nd Chance ရတဲ့ ချားလော့တယောက် ငရဲပြန်ရောက်မှာစိုးလို့ အလှုအတန်းတွေလုပ်၊ လူသတ်သမား လို့ထင်တဲ့ သူ့အမှုသည်တွေကို သူပြန် သေနတ်နဲ့ချိန် အမှန်အတိုင်းဝန်ခံဖို့ပြောနဲ့ တော်တော်လေး ဗရမ်းဗဒါတွေ လုပ်ကုန်ပါတယ်…..
တွေးမိတာက လူတိုင်းမှာ 2nd Chance လိုမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်… ဦးတည်ရာ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ အကုန်ပြောင်းသွားနိုင်တယ် ဆိုတာပါ…
Lucifer ကို ကြည့်ဖူးပေမယ့် မဝါးလောက်အစအဆုံးမကြည့်ဖူးဘူးရယ်…၊ သူအမှုလိုက်တာတွေလောက်ပဲ သိတယ်…။
ခုလိုကျတော့လဲ ဇာတ်ရည်မလည်တလည်ဖြစ်သွား..(မလည်တာက အစနဲ့အဆုံးကို မကြည့်လိုက်တာလို့..၊ လည်တာက ကိုယ်သိထားတာထက် ပိုသွားသွားလို့…ဟီးးး)။ အဲ့မင်းသားရဲ့ ပြောင်သလိုလို စပ်ဖြဲဖြဲအမူအရာနဲ့ သူ့ပုံနဲ့လိုက်တယ်လို့တော့ တွေးမိတယ်…၊ သူ့အမေကိုလဲ စွန်းခွက်ရှ်တာပဲ… ဟော့တ်တေလေ… အာာဟီးးးး
Super Natural လဲ ခဏပဲရတယ်…၊ နောက်ပိုင်းကျ ကမ္ဘာပျက်ခါနီးမှာ ပျင်းသွားရော…၊ Prison Break လဲ မပြီးလိုက်၊ ဟို သွေးဖုတ်စုပ်ကောင်ဇာတ်လမ်းတွဲလဲ တပိုင်းတစ…။
ဘယ်ဟာမှ စွဲစွဲမြဲမြဲမရှိဘဲ ငြီးငွေ့လွယ်တတ်တာကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ စိတ်ပျက်တေ…
အပေးအယူ သိပ်မြနေရအောင် နီတို့နှာယောက် လာဘ်လားဟက် <3
ဇတ်လမ်းတွဲတွေကစွဲလွန်းလို့ Game of Throne အပါ3ခုနဲ့ရပ်ထားရတယ်၊ ဒါတောင် Amarican Gods က မထွက်သေးလို့
ခုတလော (အဲ) ဒီ နှစ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်။
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ချို့ သာသနာဝန်ထမ်း တစ်ချို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုလည်း စိတ်ပျက်စရာ တွေ့နေမြင်နေရတာနဲ့ တပြိုက်နက် တချိန်နက်မှာပဲ
ကိုရီးယား ဂျပန် ဇင် ဘာသာ အယူအဆ ခပ်ပါးပါး ပါတဲ့ ကားတွေ
ဟောလိဝုဒ်က ဘာသာတရားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ် ပါတဲ့ ကားတွေ
ဘောလိဝုဒ် က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သရော်ကားတွေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။
အဲ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဘာသာဆိုတာ ကိုးကွယ်စရာမဟုတ်ပဲ ခြောက်လှန့်စရာမဟုတ်ပဲ
အတွေးအခေါ် ဘာသာရပ် တစ်ခုအနေနဲ့ ချဉ်းကပ်စရာလို့ပဲ မြင်မြင်လာတယ်။
နာ နတ်ပြည်တို့ ငရဲတို့ကို မယုံဘူးမဟုတ်ဘူးး။
နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ သေလွန်ပြီးမှ ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
အသက်ရှင်ရက်ကို အခြေအနေ အနေနဲ့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ရောက်နေကြတာပါ။
အလုပ်ဆိုတာပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စရာမလိုပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့ ရာသီမျှတ လူနေမှုညီမျှတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ဘေးက လူတွေဆီမှာလည်း လောဘ ဒေါသ စိတ်ပုတ် နာကျင်စေလိုမှု မမြင်ရဘူးဆိုရင်ကို ဒါ တင်စားမှုအရ နတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ပဲ ယူဆတယ်။
အဲလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်တွေ တိုင်းပြည်က ငရဲပါပဲ။
ပိုက်ဆံရှိလို့ အိမ်ကောင်းကြီး ဘယ်လောက်ဆောက်နိုင်ဆောက်နိုင်
ပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဆိုတာ ပြင်မရဘူးလေ။
ခုလောလောဆယ်တော့ နာတို့ ဘာသာအရ “ကံ ကံ ရဲ့ အကျိုး” ဆိုတာလေးပဲ ကွက် နှလုံးသွင်းထားတယ်။
ညာဏ်ပညာ ဆိုတာ မပြည့်စုံရင် ဒုတိယအကြိမ်သာ မက အခွင့်အရေးဘယ်လောက်ဘယ်နှခါပေးပေး မပြောင်းလဲ မလွတ်မြောက်ဘူးဟ။
နိ မြန်မာမိန်းခေး ဗုတ်ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလား …… ဟီး
အမှန်က လူလုပ်ဘာသာရေးတွေများနာဟ၊ အာ့တွေစိတ်ကုန်လာပြီ
“နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ သေလွန်ပြီးမှ ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။”
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်းကိုပါ.. အဲဒီသဘောထဲထည့်လိုက်…။
ဗုဒ္ဓတရားတွေကို.. ၅၀% အထက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်..။
အရင်တုန်းက နာဖူးတဲ့ ကြားဖူးတဲ့ နဘ်ဗာန်ဆိုတာ နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ သဘောပေါက်နေကြတာမလားဟင်?
ခုနားလည်သလောက်က ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ သဘော တစ်ခုပဲမလားး
အကောင်အထည်ဖော် နေရာပြော သွားလို့ရတဲ့ ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမလားး
မိုးပြာဆြာတော်လည်း လူဝတ်လဲလိုက်ပီဆိုတော့ သဂျီးစတော်ဘယ်ရီရောင်ဆဒေါ် လုပ်ပါလား
ဥခိုင်မှာ မိန်းမနတ်ဟက်၊ ငါ့မှာ ရှိဘူး လပြို… နီတို့လာဘ်နှာကောင် ငါ့ယူပါရား၊ ၃အူး၃ဖလှယ် ဝေဆားမြဆား… ခြစ်ယအောင်စ်
တစ်နေ့တော့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေရေးထာခဏရပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကားတွေကိုပြန်ရေးပြီး ကြိုက်တဲ့အချက်ကိုပြန်ရှုှယ်တာမျိုးလေးရေးဦးမှပဲ
Lucifer ဇာတ်လမ်းထဲ သရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေ အမူအယာသိပ်ပိုင်ကြတာပဲ။
Luciferရဲ့ အမေ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ အန်တီကြီးရယ်….
Luciferကို စိတ်အခြေအနေ ဆန်းစစ် အကြံပေးနေတဲ့ ဂွမ်းပုံကြီးနဲ့ တူတဲ့ အန်တီကြီးရယ်…
Lucifer နဲ့အတူ ငရဲက ထွက်ပြေးလာတဲ့ အမဲမလေးရယ်….
သူတို့ သရုပ်ဆောင်တာတွေ တော်လိုက်ကြတာ။
အဲ့ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း မကြိုက်တာဆိုလို့ Lucifer အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကုလားဒိန်နဲ့ စုံထောက်မမပဲ။
သူတို့ ၂ယောက် အစား…တခြားသူ သရုပ်ဆောင်ရင်…
ဒီ စီးရီးကို ဆုံးတဲ့အထိ ကြည့် ဖြစ်အုန်းမှာ။ အခုတော့ .. …
ကိုအလင်းဆက်ပြောတာထောက်ခံပါကြောင်း အခု5series မှာလွင့်နေတယ် ယမမင်းမျက်နှာကစပ်ဖြဲဖြဲနဲ့တဲ့ အိမ်ကအစ်မတွေကကောင်းချီးပေးပါကြောင်း အဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမကြည့်ဖြစ်ဘူး စကားအတင်းစပ် Grimm ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမဆိုးပါဘူး